Galmudug iyo ximin iyo xeeb oo maanta hishiis gaaray daawo sawirada iyo warbixin ku saabsan arintan.. | Mudug24
Galmudug iyo ximin iyo xeeb oo maanta hishiis gaaray daawo sawirada iyo warbixin ku saabsan arintan..
kadib kulan Maanta Magalada Gaalkacyo ay ku yeesheen Wasiiro ka Tirsan maamulada Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb Islamrkana uu goob joog ka ahaa kusimaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed ayaa labada dhinac waxaa ay kaga hadleen sidi ambaqaadida Maamul usameynta gobolada mudug iyo galgaduud.
waxyabihii lagu heshiiyaya ayaa waxaa saxaafada u aqriyay afheynka madaxtoyada galmudug Feysal Cabdi Jimcaale.
Qodobad ay ku hashiiyeen labada dhinac ayaa waxaa ka mid ahaa.
1-in labada dowlad Goboleed kawada shaqeyaan qabsoomida shirar dowlada u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud oo madasheeda loooga balansan yahay dagmada Cadaado.
2-in si wada jir ah looo fuliyo barnaamij ku aadan is dhax galka bulshada si loo xaqiijiyo hormarka iyo wada jirkooda.
3-Waxaan si wada jir ah u gaarnay in la magacaabo Guddi farsamo oo gunta ka soo dhisa talada iyo waxwada qabsiga bulshada .
4- sidaa oo kale waxaaan u aragnaa lagama maarmaan in la taageero hormarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida .garoomada diyaaradaha ,dakadaha sida hobyo oo kale anaga oo dhiiri galineyna cid kasto oo leh awood saameynta mashaariic hormarineed iyo maal galin si looga wada faaideysto kayraadka.
Labada dhinac ayaa waxaa heshiiska u kala saxiiay Wasiirka maaliyada Burhaan warsame iyo wasiirka arimaha gudaha ee ximan iyo xeeb Maxamed Xaaji Xuseen biir.
Saxiixa kadib ayaa waxaa saxaafada la hadlay wasiirka arimaha gudaha ee ximan iyo xeeb Maxamed Xaaji Xuseen biir isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay ku dadaali doonana sidii loo dhaqan galin lahaa qodobada ka soo baxay.
Sidoo kale Wasiirka Maaliyada Galmudug Burhaan Warsame Cigaal ayaa xusay in loo baahan yahay in la dar dar galiyo sameynta maamul usameynta Goboalda mudug iyo galgaduud.
Ugu dambeyntii waxaa shirka soo xeray oo ka hadlay kusimaha Madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed isagoona ugu baaqay cid kasto oo ka soo jeeda gobolada dhaxe in ay taageerto maamul usameynta gobolada dhaxe ee dalka soomaliya.
Previous articleDeg deg galmudug iyo ximin & xeeb oo heshiis gaary goordhow kaasi oo ka kooban…
Next articleDhageyso qodbadihii maanta laga jeediyay heshiiska dhexmaray galmudug iyo ximin iyo xeeb..